Kungani Abakhangisi Badinga I-CMS Kusikhwama Sabo Samathuluzi kulo nyaka | Martech Zone
I-Brandemonium | Okthoba 6-7, 2021 | Ingqungquthela ebonakalayo
Kungani Abakhangisi Bedinga i-CMS kuthuluzi Labo Lamathuluzi kulo nyaka
NgoLwesibili, ngo-Mashi 14, i-2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UStephen Morgan
Abakhangisi abaningi ezweni lonke babukela phansi inzuzo yangempela yokuthi a Uhlelo Lokumaketha Okuqukethwe (CMS) angabanikeza. Lezi zingxenyekazi ezimangalisayo zinikela ngengcebo yenani elingakatholakali elingaphezu kokumane livumele ukuthi bavele benze, basabalalise futhi babheke okuqukethwe kulo lonke ibhizinisi.
A uhlelo lokuphatha okuqukethwe (CMS) yipulatifomu yesoftware esekela ukwenziwa nokuguqulwa kokuqukethwe kwedijithali. Izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe zisekela ukuhlukaniswa kokuqukethwe nokwethulwa. Izici ziyahlukahluka kakhulu kepha iningi lifaka ukushicilelwa okususelwa kuwebhu, ukusebenzisana, ukuphathwa kwefomethi, ukuhlela umlando nokulawulwa kwenguqulo, inkomba, ukusesha nokubuyisa. Wikipedia
Ku-2016 wethu Umbiko weState of Marketing Technology sithole ukuthi amabhizinisi angama-83% manje asebenzisa i-CMS, ayibeka njengengxenye yesoftware esetshenziswa kakhulu kwezentengiso. Kodwa-ke, abathengisi abaningi baphuthelwa inani leqiniso lawa mapulatifomu anganikeza amasu abo wokumaketha abanzi ne-ROI.
Ucwaningo lwethu luphinde lwembula ukuthi ngaphezu kwesigamu sabakhangisi balwela ukusebenzisa ngokuzethemba ubuchwepheshe bokumaketha ngaphezu kwemali yokuqala (53%). Ngokukhethekile nge-CMS, kuningi kakhulu epulatifomu kunalokho abathengisi abakubonayo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi lawa mathuluzi asetshenziselwe ukuxhasa ubuciko futhi akhuthaze abathengisi ukuthi bacabange ngaphandle kwebhokisi.
Ukuhlanganiswa Kwesiphambano Somzila
I-CMS idinga ukunika amandla abakhangisi ukuthi banikeze okuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho okubandakanya izethameli namakhasimende angaba khona, ngenkathi futhi bephendula izidingo nezidingo zabasebenzisi babo. Njengoba abathengi manje sebesebenzisana nemikhiqizo ebangeni elithile lamadivayisi ahlukahlukene ngezikhathi ezahlukahlukene, ukuhlanganiswa kwamadivayisi nokuhlanganiswa kwesiteshi kubalulekile kepha kungaba yinkohliso. Umbiko wethu we-2016 uthole ukuthi ngaphezulu uhhafu wabakhangisi (51%) baba nobunzima ekuphenduleni iziteshi noma amadivayisi amasha, okugqamisa ukuthi akulula ngaso sonke isikhathi ukuwafaka isu le-CMS.
Ukufeza uhambo lwamakhasimende olungenamthungo olunika amandla umkhiqizo ukuletha noma yini ikhasimende eliyifunayo, noma nini lapho liyifuna, abathengisi kufanele babeke phambili isu lamasu amaningi. Lokhu kudinga izinga lokuqonda elithuthukisiwe, okusho ukuthi abathengisi kufanele baqale ukucija futhi basebenzise amakhono abawadingayo ukuze bakwazi ukusebenzisa ngokuzethemba leli thuluzi ngezizathu ezifanele. Lokhu kuzovumela imikhiqizo ukuthi ibone ukubaluleka kwe-CMS ekuqiniseni amasu nezinhloso.
Ukufaka Logic ku-CMS
Uma iwebhusayithi yomkhiqizo inganikeli ngalolu lwazi olungenamthungo, oluhlanganisiwe oluhlanganiswe nemvelo, ithuba liziveza ukuthi ikhasimende libheke kwenye indawo uma lingenelisekile ngensizakalo. Ucwaningo olwenziwe ngu I-Verint ne-IDC ithole ukuthi iminyaka yedijithali ikwenze kwaba nzima ngokwengeziwe ukuthi imikhiqizo ibambelele kumakhasimende njengoba ukuqamba kwezobuchwepheshe kudala ukukhetha okuningi nethuba kubathengi.
Ukuqinisekisa uhambo lwamakhasimende olungenamthungo, kubalulekile ukuthi i-CMS isebenze kahle lapho isetshenziswa ngokuhlangana namanye amapulatifomu, njengezinhlelo zeCustomer Relationship Management (CRM). Ikhasimende kufanele libe maphakathi kwanoma yisiphi isinqumo sokumaketha futhi lokhu akuhlukile uma ucabanga ngecebo le-CMS. Amathuluzi kufanele ahlanganiswe kuyo yonke inhlangano ukuze ahlanganyele namakhasimende ngesikhathi sangempela, aguqule izivakashi zibe amakhasimende abuyayo futhi avumele ithimba lezentengiso ukuthi lithuthukise futhi lihlaziye izici zamakhasimende. Lokhu kuqonda nobungoti kungasetshenziswa kulo lonke ibhizinisi, kubekwe iqembu lokumaketha njengehabhu lolwazi oluthathwa kakhulu kuyo yonke inkampani.
Ukwazi ukuletha okuqukethwe okwenzelwe wena, okubandakanyayo kungenzeka kuphela uma ikhasimende lisenkabeni yecebo le-CMS. Ngokubeka ikhasimende phambili, abathengisi kufanele baqonde kahle ukuthi hlobo luni lokuqukethwe abakufunayo. Leli zinga lokwenziwa komuntu lingatholakala kalula ngokuhlaziywa komkhiqizo noma ngokuhlanganiswa. Izokhipha imininingwane kulo lonke ibhizinisi, ivumele amaqembu ahlukene nezigaba ukwakha okuqukethwe okuhambisana kakhulu namakhasimende abo nababambiqhaza.
Ngokuthatha le ndlela ngecebo le-CMS, kuzovumela impilo ende yokuqukethwe, ngokunquma ukuthi yini ethakazelisa ikusasa elibonakalayo, kanye namanje. Lokhu okuqukethwe okwenziwe ngezifiso kungabiwa kulo lonke ibhizinisi ngaphandle nangaphandle kwamathemba namakhasimende, kuwo wonke amapulatifomu obuchwepheshe. Lokhu kuzovumela amabhizinisi ukuthi asebenzise yonke imigudu abatshalile kuyo lapho bexhumana nabasebenzisi kuzo zonke izigaba zohambo lokuthatha izinqumo.
­­­­­­­­­­­Manje sekubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukuthi abathengisi baqiniseke ukuthi baphendula njalo ezishintshweni embonini yedijithali. Kumele futhi babe nokuqonda okugcwele lapho besebenzisa amathuluzi nezinkundla zamanje nezintsha. Ukuziphatha kwamakhasimende kuhlala kusesimweni esiguqukayo soshintsho futhi ngokusebenzisa amathuluzi azungeze ngaleso sikhathi, abathengisi bangahlala izinyathelo ezimbili ngaphambili ngaso sonke isikhathi.
Tags: CMScms ukuhlanganiswaukuphathwa kokuqukethweuhlelo lokuphatha okuqukethweCRMukuhlanganiswa kwesiphambanoukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendedefinitionidcsquizivesikuyiniyini cms
Stephen Morgan Tuesday, March 14, 2017 Saturday, February 13, 2021
Co-Umsunguli webhizinisi lokuguqulwa kwedijithali, Izikwele. I-squiz ingomunye wabahlinzeki besixazululo sewebhu abahamba phambili emhlabeni Iyabonisana, yakhe futhi ilawule amawebhusayithi abandakanyekayo nezinhlelo zokusebenza eziku-inthanethi isebenzisa imikhiqizo yethu evulekile yemikhiqizo ye-Web Experience Management, iSquiz Suite.
Ungayisebenzisa Kanjani i-Article-Base Article
Ngikholwa ukuthi Impumelelo Yokumaketha Kwezokuxhumana Komphakathi ye-B2B Ihaba